China Quality and Wholesale Coaxial Cable, USB Hub, HDMI Cable - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Takelaka Wall Cable
Mandeha mamaky ny tariby takelaka takelaka vita amin'ny rindrina
Takelaka rindrina HDMI
Takelaka Wall Coaxial
Vokatra ho an'ny RV
Connexions Technology (Dongguan) Ltd.naorina tamin'ny taona 2004, dia OEM / ODM mpanamboatra ho an'ny tariby, plastika ary ny elektronika ho an'ny mpanjifa. Ny Connexions dia nanavao ny fenitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena farany an'ny ISO9001: 2015. Ny mpiasan'ny Connexions rehetra dia mandray anjara amin'ny rafitra ISO9001 hiantohana ny mpanjifa manana vokatra sy soatoavina avo lenta azo antoka. Connexions dia lasa mpikambana ao amin'ny HDMI adopter nanomboka tamin'ny 2010. Ny vokatray dia mifanaraka amin'ny UL, CUL, ETL CIA / TIA, Rohs / Reach standard ihany koa. Connexions dia manana milina maherin'ny 50 mandroso tariby sy fotodrafitrasa ho an'ny fivorian'ny vokatra ho an'ny mpanjifa & famolavolana tsindrona plastika 20, milina famokarana fonosana blister. Ankoatry ny milina famokarana manokana, ny orinasa dia manana fitaovana fitiliana mahay mitarika fiarovana, fitsapana fahombiazana ary famakafakana famantarana mba hahazoana antoka fa avo lenta sy manaraka ny fenitra. Ny tariby rehetra dia voasedra 100% alohan'ny fandefasana.
Phono Preamp amin'ny turntable
Roam Mobile 3G / 4G Wi-Fi vokatra ho an'ny RV
Escable Edition 10000mAh Power Bank 30W QC3.0 Fiampangana haingana
2.2mm Fiber Optical Fiber Audio
USB3.1 Type-C Lehilahy ka hatramin'ny tariby PD lahy
CAT7A Cable Ethernet maro, 10G Indoor / ivelan'ny trano Double Shielded Copper Copper S / FTP, 23 AWG 1000ft
CAT6A Cable Ethernet be dia be, Shielded S / FTP, 23AWG Copper Copper, ao anaty trano.
Takelaka Wall Cable HDMI COAX
Auto tariby Booster vonjy taitra
Takelaka tariby 2
Snag-tsy misy fiarovana CAT6 Patch Cables
30W PD Charger miaraka amin'ny famandrihana 3.0 haingana
Takelaka tariby resahina 1-Gang
8 amin'ny 1 USB C Hub
Takelaka rindrina COAX HDMI
Takelaka rindrina HDMI 3RCA
Takelaka rindrina 1-Gang
DVI mankany HDMI
Displayport mankany HDMI
USB C mankany amin'ny tariby taratra
8K HDMI2.1 Tariby
SPT 2 tariby
Mini Cable Siamese
RG59 Kabary CCTV Siamese
Tady jiro SPT-2
SPT-1 Tady jiro
Address: No. 6, Shenbao Road, Qishi Town, Dongguan City, Faritanin'i Guangdong
Alefaso ny fanontanina: ho an'ny fangatahana momba ny vokatray na pricelist, azafady mba apetraho aminay ny mailakao ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.
Fampidirana ho an'ny sasany amin'ireo tariby mandeha amin'ny fiara2021/04/25
Ny Car Cable dia karazana tariby / tariby fifandraisana ao anaty fiara, izay azo ampiasaina amin'ny fampitana amin'izao fotoana izao toy ny bateria, metatra ary jiro. Ny fepetra takiana amin'ny tariby mandeha amin'ny fiara dia tsy mahazaka hafanana mangatsiaka sy avo.
Azo atao ve ny mampiasa herinaratra fakantsary ivelany miaraka amin'ny Solar Panel?2021/04/25
Ahoana ny fampiasana ny fakantsary amin'ny toerana tsy misy herinaratra?
Manana an'io fanontaniana io ve ianao momba ny fiampangana ny EV?2021/04/24
Mihabetsaka ny tompona fiara mpitondra herinaratra. Andao hiresaka fanontaniana maromaro momba ny familiana fiara elektrika anio. Connexions Technology dia manolotra fampiasana Portable Home mampiasa EV Charger misy kalitao tsara. Tongasoa eto amintsika hifandray aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Fametrahana rafitra fandraisana TV Satelita2021/04/23
Ny Connexions RG6 Jumper Cable F-Type dia mety amin'ny fahitalavitra satelita nomerika avo lenta. Ny rafitry ny fahitalavitra satelita dia misy onjam-peo fandefasana uplink (transmission uplink), vatana iray amin'ny zanabolana (transponder zanabolana) ary tany mandray ( gara fandraisana downlink).
Fampiharana samihafa ho an'ny tariby coaxial 50 ohm & 70 ohm2021/04/22
Ny Connexions Technology dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana karazana Coaxial Cables. Andao hiara-hianatra momba ny rindranasa samihafa ho an'ny tariby coaxial 50 ohm & 70 ohm.
Olana amin'ny famoahana coaxial2021/04/21
Ny tariby coaxial dia be mpampiasa eo amin'ny sehatry ny indostria, ary ny fahaverezany dia ahiana hatrany. Arakaraky ny habetsaky ny refin'ny tsimokaretina coaxial no ampiasaina, dia vao mainka lehibe kokoa ny fatiantoka.
Ahoana ny fomba hifandraisanao amin'ny solosaina Audio?2021/04/20
Inona no tafiditra ao anaty andiana fitaovana audio?
Fitaovana fanamafisam-peo feno ahitana microphone, mixers, suppressors feedback, effets, equalizers, compressor, exciters, crossovers, disc players, mixers, power amplifier, speaker amplifier, mpandahateny fanampiny, mpandahateny mpandaha-teny, mpandahateny bass.
Fanatsarana rafitra rafitra malemy ankehitriny2021/04/19
Ny fiainana an-trano ao amin'ny fiarahamonina maoderina dia tsy tokony ho mora sy ahazoana aina fotsiny, fa mahay koa, mampiala voly ary azo antoka. Izany dia mitaky tariby malemy ankehitriny ao an-trano. Ny tariby malemy ankehitriny dia ny "nerve" ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, mandefa signal circuit isan-karazany amin'ny fitaovana isan-karazany izy ireo, mba hahatratrarana ireo fepetra takiana etsy ambony. Mifandraisa aminay ho an'ny tariby coaxial & Ethernet Ethernet avo lenta.
Inona no tokony hojerentsika rehefa mametraka Solar Panels?2021/04/16
Miaraka amin'ny fitomboan'ny lazan'ny teknolojia masoandro, ny vidiny dia nanakaiky ny vidin'ny fividianana fiara vaovao. Amin'izao fotoana izao dia maro amin'ireo mpiara-miasa madinidinika no mieritreritra ny hametraka panneaux solaires.
Inona no atao hoe preono Phono?2021/04/16
Connexions natsangana tamin'ny taona 2004 tany Chine, dia mpanamboatra matihanina Audio, Video Cables & Adaptors. Ireo tanora mbola tsy nampiasa turntable mihitsy alohan'ny hanantenany fa hilalao fotsiny ny turntable iray, na farafaharatsiny mifandray fotsiny amin'ireo rafitra stereo na mpandahateny misy azy ireo. Mety tsy dia mazava loatra izy ireo raha miaraka amin'ny Phono Preamp ny fihodin'izy ireo na tsia.
Ahoana ny fomba hisafidianana ireo tariby CCTV?2021/04/15
Tariby amin'ny horonantsary: ​​matetika ny telegrama video SYV75-3 dia mamindra ao anatin'ny 200 metatra, 75-5 mandefa ao anatin'ny 400 metatra, ary 75-7 dia afaka mamindra 800 metatra; ny kalitaon'ny CCTV Coaxial Cable dia zava-dehibe ihany koa, RG59U, RG6 Samy RG11 sy RG11 dia mitaky vovo-drongony 100% ary sosona miaro varahina 95%. Ny fanoherana faran'izay avo indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny loop dia tsy afaka mihoatra ny 15 ohm. Rehefa mihoatra ny 500 metatra ny halavirana dia ilaina ny mandinika ny fampiasana fampitana tariby optika.
Ahoana ny fomba ahazoana Internet tsaratsara kokoa amin'ny moto anao?2021/04/15
Ny fahazoana mari-pamantarana WiFi finday azo antoka sy tsy miova dia mety ho sarotra matetika rehefa miala sasatra amin'ny tobin'ny tobim-piantsonana ianao. Ny dongles WiFi matetika dia tsara, saingy afaka miady mafy izy ireo hahazoana mari-pamantarana mahery vaika amin'ny alàlan'ny rindrin'ny moto anao raha tsy apetrakao eo ambonin'ny tafontrano.
Fitandremana amin'ny fametrahana tariby fakantsary fanaraha-maso2021/04/12
Cable Video CCTV: Ny tariby video SYV75-3 amin'ny ankapobeny dia mamindra ao anatin'ny 200 metatra, 75-5 mandeha ao anatin'ny 400 metatra, 75-7 afaka mamindra 800 metatra; ny kalitaon'ny tariby CCTV Coaxial, RG59, RG6, dia tokony hojerena tsara. Samy RG11 sy RG11 dia samy mitaky vovo-drongony 100% ary sosona miaro varahina 95%. Ny fanoherana faran'izay avo indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny loop dia tsy afaka mihoatra ny 15 ohm. Rehefa mihoatra ny 500 metatra ny halavirana dia ilaina ny mandinika ny fampiasana fampitana tariby optika.
Ny vokatry ny fonosana blister amin'ny fiainana talantalana2021/04/11
Amin'ny maha-fonosana ara-pahasalamana mahazatra antsika, ny fonosana blister dia be mpampiasa amin'ny fonosana fanafody rehetra izay raisintsika isan'andro. Ankoatra ny takelaka mahazatra, ny supository, ny kapsily ary ny vokatra fanafody hafa, dia be mpampiasa koa amin'ny sakafo, kosmetika ary kilalao.
Fitaovana ivelany saron'ny tariby mifono vy2021/04/10
Ny akora vita amin'ny metaly ampiasaina amin'ny vodiny ivelany dia ny vy vy, tariby vy, fantsom-bolafotsy (fantsona firaka vita amin'ny aliminioma) sns.
Mandra-pahoviana ny Cable Cable ho an'ny mpandahateny anao?2021/04/07
Ny halavan'ny tariby Speaker dia tokony ho 2m ~ 2.5m, izay manakaiky ny halavany azo ampiharina, ary misy sisiny iray. Raha mihoatra ny 5m dia ho tery ny feon'ny feo ary hihena ny vokany sy ny tanjaky ny mozika, izay miteraka fako tsy ilaina koa.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny HDMI sy DisplayPort2021/04/06
Ny HDMI Cable sy DisplayPort Cable dia mihazakazaka amin'ny rafitra fototra sy ny fahasamihafana coaxial twisted mpivady, ary samy mampiasa ny hafainganam-pandeha haavo haingam-pandeha haavo haavo kely handefasana data, saingy io ihany no mampitovy azy roa.
Fahalalana vitsivitsy momba ny tariby CCTV2021/04/02
Connexions Technology dia mpanamboatra matihanina ho an'ny tariby RG58, RG59, RG6 Coaxial ho an'ny tariby CCTV. Izahay dia hizara fahalalana momba ny tariby CCTV toy ny etsy ambany. Voalohany indrindra, mila mahatakatra ireo tariby ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ianao. Ampiasaina ny fakan-tsary fanaraha-maso mahazatra: tariby Video coaxial CCTV sy tariby herinaratra DC. Ny fakan-tsary IP dia mampiasa tariby Ethernet, mivantana ny famatsiana herinaratra PoE. Ho an'ny halavirana lavitra, na fakantsary fanaraha-maso analog na tambajotra, ilaina ny fibre optika. Ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa fibre maody ho an'ny fandefasana lavitra.
Misy fangatahana hafa momba ny fameperana EV?2021/04/01
Rehefa mafana ny andro, raha tsy misy toeram-pialan-tsasatra manodidina ny tobin-tsolika, maro ireo tompona fiara no hanontany hoe: Azo atao ve ny mampirehitra ny herinaratra ao anaty air-air mba hipetraka mandritra ny fizotran'ny famahanana? Toy ny famenoana solika ao amin'ny tobin-tsolika iray, ao fitsipika, asaina mandoa vola lavitra ny olona ianao, izany hoe rehefa mandao ny fiara ny olona mandritra ny famenoana; io dia afaka manafoana ireo loza mety hitranga amin'ny fiarovana avy amin'ny loharano. Faharoa, ny fihetsika mamono ny fantson-drivotra rehefa mameno dia hampitombo ny enta-mavesatry ny batterie ary hisy fiantraikany amin'ny androm-piainan'ny bateria. toerana fampandoavana. Rehefa mameno ny fiara dia avelao ny fiara ary mandehana any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny hiandry.
Tahaka ny ahoana ny rafitry ny rafitra CATV?2021/03/30
Fomba fikajiana tambajotram-pifandraisana ho an'ny rafitra CATV System Cable: Ity fomba ity dia faritana toy ny: ny mpizara sampana rehetra dia mifototra amin'ny efitrano malemy ankehitriny, ary ny tariby matetika dia apetraka tsy miankina isaky ny terminal (socket) ho an'ny efitrano malemy mifanaraka amin'izany. Mifandraisa amin'ny mpaninjara ny sampana. Ny faritra marindrano amin'ny Coaxial Cable RG6, ny fomba fikajiana ny fampiasana tariby:
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fakan-tsarin'ny Solar Panel Power Surveillance?2021/03/29
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fakan-tsarin'ny Solar Panel Power Surveillance?
FAQ ho an'ny Solar Panels2021/03/26
Mila diovina ve ny Solar Panels? Matetika ny fanadiovan-tena dia matetika manadio tena raha amina zoro mihoatra ny 15 degre. Na izany aza nanoroana hevitra izy ireo mba hijery azy ireo isan-taona ary hosasana raha ilaina izany. Ny ankamaroan'ny orinasa manadio varavarankely dia manana rafitra manadio sy manasa ary tokony ho afaka manadio ny takelakao.
Inona ny seranan-tsambo New MacBook's Thunderbolt 4?2021/03/25
Inona no atao hoe Thunderbolt 4? Hatramin'ny nanambarana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 2011 ny interface Thunderbolt, dia nitombo ny tahan'ny fandefasana azy tamin'ny 10Gb / s tany am-piandohana ho an'ny taranaka fahatelo / faha-4 laharana 40Gb / s, ary ny famaritana ny protokol Thunderbolt 3 dia nanjary fototry ny ny famaritana USB4. Thunderbolt 4 dia nambara tao amin'ny CES tamin'ny 2020, ary ny kinova farany amin'ny famaritana dia navoaka tamin'ity volana ity. Thunderbolt 4 dia mifanaraka tanteraka amin'ny famaritana USB4.
Inona ny USB4 vaovao indrindra?2021/03/24
Ny USB 3.1 sy ny USB 3.2 dia natolotra hampitombo ny bandwidth, ary ny tanjon'ny USB4 dia tsy miova. Na izany aza, ny famoahana an'io famaritana io dia hampidirina ihany koa ny ekolojia USB Type-C ary hampihena ny fisafotofotoan'ny mpampiasa farany.
MacBook ad manafoana adala, USB-C Hub no safidinao tsara indrindra2021/03/22
MacBook adalana manafoana interface-USB-C Hub no safidinao tsara
Ny tariby HDMI2.1 AOC voamarina voalohany manerantany2021/03/21
Andro vitsy lasa izay, Silicon Line sy GRL dia nanambara fa ny tariby fibre optika voalohany eran'izao tontolo izao izay nandalo ny Ultra High Speed ​​HDMI® Certification (UHS Program) dia nahavita fanandramana fanamarinana tao amin'ny Laboratoara GRL Taipei.
Iza no tsara kokoa? RG59 VS RG6 VS RG11 CableCTC Connexions dia manana traikefa 17 taona amin'ny OEM / ODM Manufacturing ho an'ny tariby Coaxial ao anatin'izany ny tariby RG59 VS RG6 VS RG11. Andramo hofantarina hoe iza no tsara kokoa, RG59 VS RG6 VS RG11 Cable .â € ™ s hatramin'ny inona no ampiasantsika azy.
Inona ny USB4.0?2021/03/19
Ny protokol USB4.0 dia handray ny protokol Thunderbolt 3 ho an'ny fampandrosoana. Mba hilazana fa ity dia noho ny fanambaran'ny Microsoft fahazoan-dàlana malalaka ho an'ny Thunderbolt 3, izay nanafaingana ny fahatongavan'i USB4.0.
Ahoana ny fomba hanombohana ny fiara amin'ny tariby jumper2021/03/19
Efa sendra toe-javatra toy izany ve ianao niomananao handeha hiasa ny maraina, nefa hitanao fa tsy afaka mandeha ny fiara milamina omaly alina? Azo inoana fa maty na simba ny baterinao. Aza manahy, anio dia hampianariko teknika azo ampiharina ianao. Rehefa avy mianatra azy io dia afaka manomboka ny fiaranao manokana amin'ny batterin'olon-kafa.
Tariby ho an'ny fanaraha-maso horonantsary amin'ny ascenseur2021/03/19
Ny tontolon'ny fanaraha-maso fametrahana ao amin'ny ascenseur dia tena manokana. Ny ascenseur dia tsy maintsy mihetsika ambony sy midina tsy mijanona, ary ny tariby fametrahana sy ny fandefasana ny fakantsary fanaraha-maso ny tamba-jotra dia manana fepetra manokana ihany koa. Amin'izao fotoana izao, fampitaovana Ethernet Cable natokana ho an'ny be mpampiasa kokoa, fampitana tetezana tambajotra tsy misy tariby.
FAQ ho an'ny CTC Connexions 8 amin'ny 1 USB C Hub Dock2021/03/19
FAQ ho an'ny CTC Connexions 8 amin'ny 1 USB C Hub Dock
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny vokatra Solar Panel Video Surveillance?2021/03/19
Inona avy no tombony azo avy amin'ny vokatra Solar Panel Video Surveillance? Azo jerena ny Solar Panel Video Surveillance: faritra fanaraha-maso lehibe izay tsy mety amin'ny herinaratra ho an'ny tanàn-dehibe sy ambanivohitra, fanaraha-maso ny toetoetran'ny arabe, fanaraha-maso ny toerana fanamboarana, fanaraha-maso ny faritra fitrandrahana, lehibe- fanaraha-maso ny fandefasana ambaratonga sy fanaraha-maso ny masonkarena, fanaraha-maso ny tambajotra lehibe, fanaraha-maso ny fiarovana ny doro ala, fanaraha-maso ny sisin-tany lehibe, fanaraha-maso ny fitaovana fitahirizana rano, fanaraha-maso ireo toerana fambolena sy fiompiana lehibe.
Inona ny Thunderbolt?2021/03/19
Ny olona vaovao amin'ny solosaina finday dia tsy mahafantatra hoe inona ilay seranana USB-C, na inona izany Thunderbolt izany. Fantatr'izy ireo ihany fa manana seranan-tsambo Thunderbolt 3 ny MACBOOK PRO. Raha tsorina, ny interface Thunderbolt dia safidy amin'ny USB TYPE-C
Inona no atao hoe tariby ambany voltika?2021/03/19
Karazan-tariby mahazatra ampiasaina amin'ny tariby misy herinaratra ambany dia misy: RJ11 Cables dia ampiasaina amin'ny telefaona matetika. CAT5E sy CAT6 ampiasaina amin'ny tamba-jotra data ary hitondra signal audio sy video. Fiber optic dia afaka mandefa data, video, audio amin'ny hafainganam-pandeha betsaka ary be mpampiasa amin'ny tambajotra internet. RG59, RG6 na RG11 75 ohm tariby coaxial dia matetika ampiasaina amin'ny CCTV, CATV, Satellite TV, sns.
Inona avy ireo fampiharana mahazatra amin'ny tariby coaxial?2021/03/11
Ny tariby coaxial ("coax" raha fintinina) dia heverina fa tsy ampiasaina raha tsy amin'ny telefaona finday sy fantsom-pahitalavitra (CATV) amin'ny finday fa amin'ny tontolon'ny orinasa ara-barotra, manomboka amin'ny fahitalavitra mihidy (CCTV), audio sy video hatramin'ny antennas matetika amin'ny radio. ary na dia ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra sasany aza dia hita ao. Noho izany dia ilaina tokoa ny mahatakatra an'ity haino aman-jery tariby ity sy ny fomba fitsapana azy.
Inona no maha samy hafa ny Cable CAT5e CAT6?2021/03/10
CTC Connexions dia mpanamboatra tariby tambajotra, tariby ary tariby coaxial mandritra ny 17 taona. "Category 5e" dia manondro ny sokajy 5e mpivady miolakolaka tsy voaro mafy. Andao hojerentsika ny maha samy hafa ny tariby tambajotra Super Category 5 sy ny tariby tambajotra Super Category 6 .
Hosoloina fibre optika ve ny tariby varahina CAT?2021/03/10
Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fisian'ny serivisy vaovao tsy tapaka toa ny computing cloud, data be, ary 5G, mitombo hatrany ny haben'ny ivon-tahiry, ary mihasarotra hatrany ny maritrano sy ny cabling-ny. Ny fihenan'ny fibre optika maivana sy tsikelikely dia mahatonga ny fitaovam-pifandraisana hazon-damosina ary mitombo ihany koa ny fangatahana fibre optique. Ny habetsaky ny fibre optique any amin'ny ivon-tahiry lehibe dia avo hatramin'ny 70%, izay avo lavitra noho ny tariby varahina. Mpampiasa mpivady maro miolakolaka no manahy sao hosoloina fibre optika tanteraka ny tariby varahina.
Inona no tokony hataontsika raha miala ny baterin'ny baterinao? Mitondra tariby booster Emergency fotsiny.2021/03/09
Inona no tokony hataontsika raha miala ny baterin'ny baterinao? Mitondrà tariby booster Emergency miaraka amin'ny banky 12V Power fotsiny.
Fikarohana eny an-tsena: Hisolo ny HDMI varahina efa misy ve ny tariby HDMI optika?2021/03/09
Fikarohana eny an-tsena: Hisolo ny HDMI varahina efa misy ve ny tariby HDMI optika? Inona ny hoavin'ny HDMI optika?
Ny tariby HDMI dia matetika ampiasaina sy manan-danja. Iza amin'ireo no tsara kokoa?2021/03/08
Ny tariby HDMI dia matetika ampiasaina sy manan-danja. Iza amin'ireo no tsara kokoa?
Moa ve ny TV-nao manana HDMI 2.1 ho an'ny PS5-nao?2021/03/08
Moa ve ny TV-nao manana HDMI 2.1 ho an'ny PS5-nao?
USB Type C mankany HDMI dia mitondra traikefa vaovao2021/03/08
Vao tsy ela akory izay, ny orinasam-pifandraisana HDMI dia namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny famaritana ny maody switch HDMI namboarina ho an'ny USB Type-C. Ny fahaterahan'ity fomba ity dia ahafahan'ny fitaovana loharano manana alalana HDMI mifandray mivantana amin'ny seho misy alàlan'ny HDMI amin'ny alàlan'ny mpampitohy USB Type-C, tsy misy kaonty sy mpampifandray henjana, adaptatera na fitaovana fiarovana fitaovana, ary azo ampitaina amin'ny tariby tokana The Ny fambara HDMI an'ity singa ity, toa ny Apple's Macbook, dia azo atsofoka amin'ny TV na monitor.
NHK dia handefa ny Lalao Olaimpika Tokyo 2021 ao amin'ny Channel 8K azy ireo2021/03/07
Ny orinasan'ny NHK ao Japan dia nanambara ny fanombohana ny fantsona fahitalavitra voalohany misy vahaolana 8K amin'ny taona 2018. Ny fandefasana fahitalavitra hatramin'ny 7680 x 4320 teboka dia nanomboka tany Japon tamin'ny voalohan'ny volana desambra 2018. Ny Lalao Olaimpika 2021 ho avy any Tokyo dia halefa mivantana amin'ny 8K.
Inona ny HDMI 2.1?2021/03/06
Inona no atao hoe HDMI 2.1? Inona avy ireo fisongadinan'ny fenitra 8K HDMI 2.1?
Ilaina ve ny misafidy ny halavan'ny HDMI Cable?2021/03/05
Tsy misy fetra mazava momba ny halavan'ny HDMI Cable. Ny fikambanana HDMI mihitsy dia mampiseho fa ny fambara HDMI dia azo alefa mihoatra ny 300 metatra.
Hanimba ny bateria ve ny charger haingana?2021/03/05
Hanimba ny bateria ve ny charger haingana?
Tsy azo odian-tsy hita ny tariby coaxial2021/03/05
Ho an'ny fanandramana tariby varahina dia niresaka betsaka momba ny atiny mifandanja mifangaro volo vita amin'ny varahina izahay, toy ny sokajy 6 (CAT 6), sokajy 6 (CAT 6A) ary ny sokajy 8 (CAT 8). Na dia be mpampiasa ity karazana cabling ity hanohanana ny fandefasana feo, data, ary horonan-tsary any Ethernet, tsy midika izany fa io no karazana cabling varahina mety sendra anao.
Fahalalana USB TYPE-C2021/03/04
Fahalalana USB TYPE-C
Fomba fiasa miisa 3 ho an'ny Fiara Elektrika2021/03/04
Fomba fiasa miisa 3 ho an'ny Fiara Elektrika
Fampidirana ny Cable CAT82021/03/04
Raha ao amin'ny sehatry ny serasera amin'ny tamba-jotra ianao, mino aho fa tokony hahafantatra tariby Ethernet sasany, toy ny telegrama sokajy Category 5e, tariby tambajotra sokajy 6 ary tariby tambajotra sokajy 7. Fa fantatrao ve hoe inona ny tariby tambajotra Cat8 sokajy valo? Inona no tsy itovizany amin'ny tariby tambajotra sokajy 5, tariby tambajotra sokajy 6 / Super 6 ary tariby tambajotra sokajy 7 / Super 7? Andao hitondra anao hahafantatra ny taranaka vaovao amin'ny tambajotra jumpers-Cat8 valo tariby tariby.
LED Panel Solar ho an'ny fakan-tsarimihetsika WiFi any ivelany2021/03/04
Ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia loharano angovo azo havaozina tsy mety ritra, jiro amin'ny masoandro, aza manahy momba ny herinaratra lafo vidy, aza manahy ny amin'ny tsy hisian'ny famirapiratany mazava! Manam-pahaizana mahavonjy angovo afaka manome anao tsy ampoizina tsy ampoizina!
Karazana Banky Herinaratra inona no entina amin'ny fiaramanidina?2021/03/04
CTC Connexions dia mpanamboatra matihanina an'ny banky Power portable. Azo entina anaty fiaramanidina ve ireo banky herinaratra? Andao hiara-hamantatra izany. Ny ankamaroan'ny National Aviation Administration ao Shina dia mamaritra fa ny angovo nomena isa dia ambany na mitovy amin'ny 100W ary azo entina miaraka aminao, fa tsy voamarina. Raha isaina mihoatra ny 100Wh ny banky herinaratra fa tsy mihoatra ny 160Wh, dia aorinan'ny zotram-piaramanidina ihany izy io, fa ny mpandeha tsirairay kosa dia tsy tokony hitondra banky mihoatra ny roa.
Inona ny interface HDMI? Ahoana ny fomba hisafidianana tariby HDMI?2021/03/03
Inona ny interface HDMI? Ahoana ny fomba hisafidianana tariby HDMI?
Inona no atao hoe Coaxial Cable?2021/03/03
Inona no atao hoe Coaxial Cable? Inona ny RG59 RG6 RG11?
Ahoana ny fisafidianana mpivady Ethernet Cable miolakolaka amin'ny tetikasa fametrahana fakantsary fanaraha-maso tambajotra?2021/03/03
Ny scenario fampiasana sy ny fahasamihafana misy eo amin'ny Coaxial Cable & Ethernet Cable.2021/03/03
Inona no maha samy hafa ny HDMI2.1 sy HDMI2.0?2021/03/03
Amin'izao fotoana izao, HDMI 2.0 dia afaka mahatratra sary 4K amin'ny sary 60 FPS na sary 8K amin'ny 30 FPS. Ny HDMI 2.1 vaovao dia afaka mampiseho sary 4K amin'ny sary 120 FPS na 8K amin'ny 60 FPS, ary afaka manohana ny fampisehoana vahaolana 10K aza.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny interface Apple sy USB Type C2021/03/03
Ny USB-C dia midika hoe USB Type C, izay fanitarana ny fenitra USB fampiasa matetika. Ny mampiavaka ilay interface vaovao dia kely sy faran'izay tsara, tsy misy fijerena ny lalana tsara sy ratsy, mahaolona kokoa. Raha teorika dia azo ampiasaina amin'ny fiara fitateram-bahoaka USB 2.0 sy 3.0 ny interface C Type, fa ny mpanamboatra amin'izao fotoana izao dia mazàna mampiasa Type C miaraka amin'ny famaritana USB3.1 vaovao.
Mitondrà tariby Jumper sy banky mandeha amin'ny herinaratra izay afaka manampy anao hampandeha ny motera misy fiara raha maika2021/03/03
Indraindray ianao dia mila Jumper Cable sy banky elektrika fotsiny nefa tsy afaka manomboka ny motera fiara
Famantarana ny tariby CCTV mahazatra2021/03/03
Kaody coaxial tsy azo odian-tsy hita2021/03/03
Fifanarahana USB3.1 sy Type-C2021/03/03
USB Type-C (USB-C raha fintinina), manana haben'ny interface vaovao sy anarana somary milay izy, mora be ny manao namana izay mandre an'io teny io hieritreritra fa fenitra USB vaovao ity, saingy tsy izany . Ny Type-C dia ampahany amin'ny fenitra USB 3.1 ihany fa tsy fenitra vaovao.
Tsenan'ny TESLA EV amin'ny taona 2020 Mitombo ny fangatahana EV Charger2021/03/03
Tsena TESLA EV amin'ny taona 2020EV Mitaky ny fangatahana charger
FAQ amin'ny CTC Connexions CCTV Cable2021/03/03
Famantarana tariby I2021/03/03
Famantarana ny tariby II2021/03/03
Fisafidianana tariby ho an'ny karazana tetikasa cabling rehetra
Topy maso tariby coaxial2021/03/03
Ny tariby coaxial dia mampiasa tariby varahina mafy ho fotony sy sosona fitaovana insulate. Ity sosona fitaovana insulate ity dia voahodidin'ny mpampita harato matevina, ary ny lambam-pandriana dia rakotra sosona fitaovana fiarovana. Misy tariby coaxial roa be mpampiasa. Ny iray dia tariby 50-ohm, izay ampiasaina amin'ny fampitana nomerika, ary antsoina koa hoe tariby coaxial baseband satria ampiasaina amin'ny fandefasana baseband ny ankamaroany; ny iray hafa dia tariby 75-ohm, izay ampiasaina amin'ny fampitana analog, izay ny tariby coaxial broadband horesahina amin'ny fizarana manaraka. Ny fahasamihafana dia vokatry ny antony ara-tantara fa tsy ny antony ara-teknika na ny mpanamboatra.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny tariby audio?2021/03/03
Halaviran'ny fandefasana CABLES isan-karazany amin'ny fanaraha-maso horonantsary2021/03/03
Teknolojia Vaovao 8K: Seho 8K HDMI2.1 sy fizarana ny Scheme2021/03/03
Ny interface video nomerika 8K malaza indrindra dia HDMI2.1. Ity manaraka ity dia famaritana fohy momba ny endrika, ny fomba fandefasana, ny asan'ny DSC ary ny asan'ny HDR tohanan'ny HDMI2.1.
Hanimba ny telefaona ve ny fakana vola amin'ny banky Power? Eto ny marina2021/03/03
Hanimba ny telefaona ve ny fakana vola amin'ny banky Power? Eto ny marina - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Fampidirana ireo tariby maromaro ampiasaina amin'ny fanaraha-maso sy fiarovana2021/02/04
Ahoana ny fomba hisafidianana CAT6 na CAT5E ho an'ny PoE Switch?2021/01/29
Inona no mahasamihafa ny CAT5E sy ny CAT6 amin'ny tranobe manan-tsaina2021/01/28
Ampianaro ny fiara ï¼ˆelectric EV ï¼ ‰ ao an-trano - Manazava ireo fanontaniana lehibe izahay2021/01/22
Mihamalaza hatrany ny fiara mpitondra herinaratra any Shina, Eoropa, Etazonia & distrika hafa, EV Charger no iray amin'ireo fitaovana ilaina indrindra ilainay.